Ady & Fifandirana · Novambra, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Ady & Fifandirana · Novambra, 2017
Tantara mikasika ny Ady & Fifandirana tamin'ny Novambra, 2017
"Te-hampiasa vola any Afganistàna aho, tsy nanadino velively ny fireneko aho ary tsy afaka ny hiaina finaritra raha mahafantatra fa mijaly ny mpiray tanindrazana amiko."
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana12 Novambra 2017
Ny Bitsibitsika Afgana : Hankalaza Sa Tsia!
Azia Afovoany sy Kaokazy09 Novambra 2017
Miresaka momba ny tsingerintaona nirodanan'i Kabul teo am-pelatànan'i Mujahedin ireo bilaogera Afgana . Tsy mitovy hevitra izy ireo na hankalaza izany na tsia. Nahoana no tokony hankalaza io andro io ny vahoaka Afgana? Moa ve nahazo fahafahana, rariny ve izy ireo na ....
Bitsibitsika Afgana : Fiarahamonim-pirenena, Kolikoly Ary Fitondrana Laika
Eoropa Afovoany & Atsinanana09 Novambra 2017
"Satria lasa tanànakely madinika iray kanefa manerantany ity tontolo ity dia tsy miteraka fotsiny ny fisaratsarahana ao anatin'ny fianakavian'olombelona ny zava-misy toy izany, fa manimba ihany koa ny ezaka atao amin'ny fandriampahalemana sy ny firaisankina manerana izao tontolo izao."
Libanona: Dika sy Vokany
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana05 Novambra 2017
Ny hoe mahantra ao Libanona dia tsy hoe fotsiny kely ny vola miditra aminao, fa koa tsy afaka mahazo rano madio ianao, tsy afaka mandeha an-tsekoly ary tsy manana hialofana